भेगन जीवनशैली अपनाएकोमा सन्तुष्ठ छु : साधुराम गिरी - Always Tourism
काभ्रेपलान्चोक जिल्ला सापिङ गाविस वडा नं.१ गैरीटोलमा जन्मनु भएका साधुराम गिरी ५३ वर्षको हुनुभयो । कक्षा ८ सम्म गाउँकै विद्यालयमा अध्ययन गरी २०४४ सालमा नन्दीरात्रि माध्यमिक विद्यालय नक्साल काठमाण्डौबाट एसएलसी उतिर्ण गर्नुभएको गिरीले पिपल्स क्याम्पसबाट वि.ए सम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नु भएको छ । वहाँले पेशागत जीवनमा धेरै क्षेत्रमा संलग्न रही सफलता हासिल गर्नुभएको छ । १४ वर्ष विभिन्न बोडिङ स्कूलहरुमा शिक्षण पेशामा संलग्न रहनु भएको वहाँले २ वर्ष सहकारीमा आफनो पेशागत जीवन व्यतित गर्नुभयो । १७ वर्षदेखि विभिन्न होटलमा कार्यरत रही आतिथ्य सत्कार पेशामा रमाइरहनु भएका गिरी हाल वनेपामा संचालित होटल सत्यमको म्यानेजरको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । त्यसअघि वहाँले धुलिखेल माउन्टेन रिर्सोटमा १० वर्ष सेवा गर्नुभएको छ ।
नेपाल अहिंसा प्रेमी समाजको सदस्य रहनु भएको वहाँ नवजीवन परोपकार समाजको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको आजिवन सदस्य तथा नेपाल हद्यरोग प्रतिष्ठान काभ्रे शाखाको आजिवन सदस्य गिरी एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालसँग लामोसमय देखी सम्वद हुनुहुन्छ । पूर्व प्रहरी कर्मचारी परिषदको संस्थापक सचिव गिरीले १८ वर्षको उमेरमा पैतृक सम्पति नलिने घोषणा गनुभयो । आफनो पौरखले बाँच्नु पर्दछ र कर्मलाई साधनाको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ भन्ने भावले अगाडी बढ्नु भएका गिरीले पैतृक सम्पतिले मानिसलाई लोभि बनाउने, परिवारमा विखण्डन ल्याउने तर्क गर्नुहुन्छ । २०४७ सालमा पुष्मादेवी जंगमसँग मागी विवाह गर्नुभएको गिरीको एक छोरा कम्प्युटर इन्जिनियर अध्ययनरत हुनुहुन्छ । काठमाण्डौ बस्ने वहाँहरु दिनहुँ धुलिखेल र वनेपाबाट ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ । वहाँको छोरा भेगन र श्रीमती भेजिटेरियन खानपानमा अभ्यस्त रहदै आउनु भएको छ ।
अव्राहम लिंकन र महात्मा गान्धिको विचारबाट प्रभावित गिरी सकेसम्म आफनो व्यतिगत कामहरु आफै गर्नुहुन्छ । खाना पकाउने, लुगा धुने तथा सरसफाईमा श्रीमतीलाई सदैव साथ दिनुहुन्छ । महिलालाई बोलीले मात्र होइन व्यवहारले सम्मान गर्दै शशक्तिकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने वहाँको विचार छ । प्रायश विहान ५ बजे उठ्ने वहाँ दैनिक आधा घण्टा पैदल हिड्नुहुन्छ । बिहानी हिडाइले शरिर सन्तुलनमा सहयोग गर्ने तथा पाचन प्रक्रियासँगै विहानी वातावरणले दिनभरी काम गर्न उर्जा प्राप्त गर्ने अनुभव छ गिरीसँग । बिहानी खाजाको रुपमा ओखर, मधिशे वदाम, जौको च्याख्ला, छोगडा तथा किससिम मिसाएर खाने वहाँ तिन वर्षदेखी भेगनको अभ्यासमा हुनुहुन्छ । लामोसमय देखी शाकाहारी जीवन व्यतित गर्दै आउनु भएको वहाँलाई कुनै प्रकारको रोग छैन । धेरै खाए मल, थोरै खाए बल भन्ने युक्ति अनुसार वहाँ थोरै खाना खानुहुन्छ । सन्तुलित आहारको रुपमा १ भाग झोल, १ भाग ठोस अनि १ भाग फलफूल र १ भाग खाली पेट राख्नुपर्ने मान्यता छ । पेट भरी खादाँ राम्रोसँग पाचन नहुने र खानेकुराबाट प्राप्त हुनुपर्ने शक्ति शरीरले पाउन नसक्ने वहाँको भनाई छ । संसारमा जति मान्छे खान नपाएर मर्छन त्यो भन्दा बढि मानिस खान नजारेर रोग लागि मर्ने गरेको तथ्य छ । त्यसैले खानेकुराप्रति सजग रहुनपर्ने वहाँको तर्क छ । बेलुकाको खाना सुत्नुभन्दा करिव तिन घण्टा अघि खानुपर्ने डाक्टरहरुले बताएका छन् । स्वस्थ्य जीवनशैली नभएमा खुसी र सुखी हुन सकिदैन । त्यसैले स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउन उहाँको आग्रह छ ।
वहाँको सादगीपनमा श्रीमतीको ठूलो सहयोग र समर्थन छ । जीवनसाथीको सहयोग नहुने हो भने वहाँको सादा जीवनमा धेरै अप्ठ्याराहरु आउने थिए । छोराले पनि वहाँको जीवनप्रति धेरै नै गौरव गरिरहेको छ । परिवार नै शाकाहारी र तीन वर्षदेखी भेगन हुनु भएका गिरी शाकाहारी जीवनशैलीले स्वस्थ्य समाज निमार्णमा धेरै सहयोग पुग्ने तर्क राख्नुहुन्छ । सकारात्मक जीवनशैलीलाई अनुशरण गर्दै वहाँले भेगन सम्बन्धि किताव प्रकाशन गरी जनचेतनाको लागि निशुल्क वितरण गरिरहनु भएको छ ।भेगन भन्नाले मासु मात्र नखानु नभइ गाई वस्तुको दुधबाट बनेको खानेकुरा समेत नखानुलाई बुझिन्छ । भेगनको अभ्यास त्यति सजिलो भने छैन । दैनिक जीवनयापनमा आफुलाई थप साघुरो घेरा भित्र राख्नुपर्दछ । सिमित खानेकुराबाट आफनो आहारामा सन्तुष्ठ हुन जान्नुपर्दछ । अहिंसाबाट निस्कने शान्ति दिगो हुने गिरीको भनाई छ । नेपालमा शाकाहारीप्रेमीहरु बढ्दै गएको खवरले उत्साहित गिरी स्वास्थ्यप्रतिकोे चेतना जागरणको लागि पनि अहिंसा विरोधी गतिविधिलाई थप सक्रिय पार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । मानव कल्याणको लागि हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न नहुने तर्क छ वहाँसँग । शान्त स्वभावका गिरीको सक्रिय जीवनशैली प्रेरणादायी र लोभलाग्दो छ ।
३० असार ,काठमाडाैँ ।जुम्लाको पूर्वी भेग पातारासी गाउँपालिका हुँदै चन्दननाथ नगरपालिकामा सलह किरा देखिएपछि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र प्रतिकार्य योजना बनाउन थालिएको...
वि.स. २०११ सालमा बनेपामा जन्मनु भएका डा. भुषण श्रेष्ठ पेशाले डाक्टर हुनुहुन्छ । २ दिदीकाे भाइ अनी २ भाइकाे दाइ श्रेष्ठले प्रवेशिका परिक्षा आनन्दकुटी...
काठमाडौ, हस्पिटालिटी फाउण्डेसन अफ नेपालको आयोजनामा गेस्टोनोमी मोर्डन नेपाली फुड फेस्टको आयोजना हुने भएको छ । होलीलाई लक्षित गरेर फागुन २७, २८ र...